Xog: Is-baheysi ka dhan ah dhismaha Galmudug oo bilaawday – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo hoggaamiyaha Ahlu-Sunna Waljamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax, ayaa la sheegay in todobaadkaan ay kulan qarsoodi ah ku yeesheen magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland.
Xogta aan ka helnay kulankaas waxay sheegeysaa inay labadaas masuul ku heshiiyeen in la fashiliyo doorashada ay xukuumadda federaalku gar-wadeenka karahay ee lagu wado inay ka dhacdo Galmudug.
Ila wareedyo aad ugu dhaw-dhaw dhinacyadaas ayaa noo sheegay in kulankaas oo saacado badan qaatay uu Madaxtooyada Garowe ka dhacay todobaadkan, kadib markii Macallin Maxamuud uu safar qarsoodi ah ku tagay Garowe.
Qodobada lagu lafa guray kulankaas ayaa kala ahaa, in la fashiliyo qabsoomidda doorashada Galmudug ee xukuumaddu ay dabada ka riixeyso iyo in la sameeyo isbaheysi ka dhan ah madaxda haatan hoggaamisa dowladda federaalka ee Khayre iyo Farmaajo, kaas oo ku wajahan doorashooyinka federaalka ee 2020/2021-ka, sida aan ku helnay xogta .
Intii ay socdeen kulamadaas ayey dhinacyadu ka arinsadeen tallaabooyinka ay tahay in la qaado, si loo cuuryaamiyo doorashada Galmudug ee xukuumadda federaalku ay ka waddo Dhuusamareeb.
Dani iyo Macalin Maxamuud ayaa gaba-gabadii kulankooda ku heshiiyey in Ahlu-Sunna qaadacdo nidaamka doorasho ee Galmudug uu ka wado Ra’iisul Wasaare Kheyre, doodeeda koowaadna ay ka dhigto in dadka reer Galmudug loo madax-baneeyo masiirkooda, fursadna loo siiyo inay iyagu maamul soo dhistaan.
Sidoo kale Madaxweyne Dani ayaa Macallin Maxamuud u soo bandhigay isbaheysi siyaasadeed oo dhawaan ay aas-aaseen Dani iyo Senetor Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke oo maalmo ka hor tegay Garowe.
Isbaheysigaas oo ay ku mideysanyihiin madaxda maamulada Puntland, Jubbaland iyo siyaasiyiin iyo xisbiyo siyaasadeed oo kale ayaa lagu daray hoggaamiyaha Ahlu-Sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan, waxuuna u jeedka is-baheysigaasi ku wajahanyahay doorashada dalka ka dhici doonta sanadka 2020/2021-ka.
Is-baheysigaas cusub ayaa la sheegay inuu si weyn uga soo hor jeedo in doorashada Galmudug ay uu ku soo baxo musharax ay wataan madaxda dowladda federaalka.
Maxaad ka ogtahay magaalada maalinteedii ay isku bedeshay habeen?